बिकनीदेखि एप्रोनसम्म : अक्सफोर्डसँग मिलेर भ्याक्सिन आविष्कारमा विश्व सुन्दरी ! – Nepal Press
बिकनीदेखि एप्रोनसम्म : अक्सफोर्डसँग मिलेर भ्याक्सिन आविष्कारमा विश्व सुन्दरी !
२०७७ पुष ३ गते १६:२३
कुनैबेला बिकनी लगाएर मिस इङ्ल्यान्डको क्राउन जितेकी क्यारिना टिरेलको भूमिका यसपटक बदलिएको छ । उनी यसपटक सेतो एप्रोन लगाएर कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आविष्कार जुटेकी छन् ।
चिकित्सक एवं प्राध्यापक समेत रहेकी ३१ वर्षिया टिरेल अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीसँग मिलेर भ्याक्सिन बनाउन व्यस्त छिन् । यस्तो उदाहरणीय कामबापत उनलाई विश्व सुन्दरी प्रतियोगिताको आयोजक संस्थाले पनि बधाइ दिएको छ ।
सन् २०१४ मा मिस इङ्ल्यान्डको ताज जितेकी टिरेललाई बेलायतमा सर्वाधिक युवा मस्तिष्कको रुपमा पनि डेली मेल लगायतका संचारमाध्यमले प्रशंसा गरेका छन् । १२ महिनादेखि उनी अक्सफोर्डको टीममा सामेल भएर वैज्ञानिकको रोल निर्वाह गरिरहेकी छन् ।
क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट मेडिकल डिग्री हासिल गरेकी टिरेलले सय वर्षयताकै ठूलो स्वास्थ्य संकटविरुद्ध काम गर्न पाउँदा खुशि लागेको बताएकी छन् । बेलायती दम्पत्तिबाट स्वीटजरल्यान्डमा जन्मिएकी टिरेलले सुन्दरीले पनि समाजको लागि काम गर्न सक्ने बताइन् ।
तर, उनको वाल्यकालिन सपना भने मलेरियाजस्ता रोगविरुद्ध काम गर्नु थियो । १५ वर्षकै उमेरदेखि मोडलिङमा लागेकी उनी इङ्ल्यान्डमै चर्चित मोडेल पनि हुन् ।
प्रकाशित: २०७७ पुष ३ गते १६:२३
शौचालयको दुखः महिनावारी हुँदा विद्यालय नै जाँदैनन् छात्रा
सुपर लिगमा आवद्धताबारे बार्सा, युभेन्टस र मड्रिडमाथिको अनुसन्धानबाट पछि हट्यो यूईएफए